Sirika - Wikipedia
Sirika (ku Chingezi: silk) idondo remarise inogadzirwa ne chigwerekwete kana chisakafuriro chehonye resirika. Marise esirika akasimba kwazvo uye anoshandiswa kugadzira hembe.
nduko ye sirika
Juzi re sirika rekuchayina
Jira re sirika rinogona kugadzirwa kuita ragi, wariro (bedding), kana inogona kushandiswa kunyora kunyora kana kupenda. Kudhara, sirika yaishandiswa kugadzira maparashuti. Tsika yeku kudza mahonye esirika ekugadzirisa sirika inonzi tsikayeseri (sericulture).
Madzvatsvatsva mazhinji ane dondo remarise anonzi wo sirika.
2 Puropati ye chemishonga
Chayina yakasika hembe ye sirika muna 3000 B.C. ne kutengeza pasirose ne nzira ye sirika nekuti yaive yakakosha uye ichidhura. Machayina ndivo vega vabaritsa nekutenga sirika pasirorse kuzvika muna 533 CE.
Puropati ye chemishongaEdit
Sirika inogadzirwa ne honye ye sirika ine zvivakanyama, serisini (sericin) ne riseini kaka fibhurosini (fibroin).
Riseini is structural center ye sirika uye inoipa husimba. Inogadzirwa ne maamino asidhi, iyo inogadzira marise akasimba uye anotadzika kumhedura. Husimba we tenziri (tensile strength) uripo nekuda kwe sungo ye sikamanzi. Pano tandavadzwa sirika, pane fosi yakasimba pamasungo[rabva kuchisungo], saka haamhedurike.
Serisini imetiriyau ino nama saka poteredza risesini uye inoi protecta kunze. Sirika inodzinda michegwa ye asidhi yakawanda, zvichisiyana nesarufa asihi yainonyeutsa. Pfundiro (perspiration) inopa sirika ruvara runoita se huroro.
Nzira ye sirika
↑ "marise" zvinoreva kuti 'fibre'
↑ "chigwerekwete" zvinoreva kuti 'cocoon'
↑ Sadza#Zvivakamuviri Zvinowanikwa Musadza
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirika&oldid=89593"
Last edited on 13 Gunyana 2021, at 06:04
This page was last edited on 13 Gunyana 2021, at 06:04.